सुत्ने जागिरको तलब लाखभन्दा बढि | Aanbookhairenipost
कार्यालय वा कुनै कार्यस्थलमा कामको समयमा तपाइँ निदाएको बोसले देख्यो भने के होला ? अवश्य पनि तपाईँ चेतावनी वा अन्य कारवाहीको भागिदार बन्नुहुन्छ । तर चीनमा भने त्यसको ठिक उल्टो एक युवकले सुतेवापत महिनाको १ लाख २० हजार तलब पाउँछन् ।
ती युवकको जागिरको काम नै सुत्ने हो । सुत्ने पनि कहाँ चानचुने ठाउँमा हो र ? सुविधासम्पन्न होटलहरुमा । को जागिरको काम नै सुत्ने छ । उनले सुतेवापत नै महिनाको १ लाख २० हजार तलब पाउँछन् । सबैलाई अचम्म लाग्नसक्छ , सुत्ने जागिरका लागि लाख भन्दा बढि तलब । जिज्ञासा उत्पन्न हुनसक्छ , आखिर सुत्ने जागिरको औचित्य के ?
वास्तवमा सुत्ने जागिर पाएका ती २७ वषर्ीय ली जियाको भूमिका भने निकै ठूलो रहेछ । उनको काम भनेकी सुविधासम्पन्न भनिएका होटलहरुका ओछ्यानमा सुत्ने र त्यसपछि होटलका बिछ्यौना र अरु सुविधाहरु कत्तिको गुणस्तरीय छन् भन्ने कुरा जाँच्ने ।
साथै कोठामा राखिएको परफ्यूम सही छ की छैन , कोठामा सरसफाइ पर्याप्त छ की छैन , टेलिभिजनमा आउने कार्यक्रमहरु गुणस्तरीय छन् की छैनन् , तथा होटलमा ग्राहकमाथि कस्तो व्यवहार गरिन्छ लगायतका कुराको अनुगमन गर्ने जिम्मेबारी उनको हो ।
बाहिरबाट हेर्दा ली को यो काम निकै आरामदायक लाग्नसक्छ । तर ली लाई भने आफ्नो जिम्मेबारी पूरा गर्न ठूलै मेहेनत गर्नुपर्छ । किनकी उनले होटलका कोठामा रहेका साना भन्दा साना कुराहरुमा पनि ध्यान राख्नुपर्छ ।onlinekhabar
This entry was posted on October 4, 2011 by aanbookhairenipost in national news.